"संपर्क" मा सन्देश खोल्न छैन। "VKontakte" मा सन्देश कसरी पढ्न
त्यसैले आज हामी के यदि तपाईं "संपर्क" मा सन्देश खोल्न छैन बारेमा कुरा हुनेछ। साथै, हामी कसरी यो सामाजिक सञ्जाल मा एक पत्र पठाउन बाहिर आंकडा, र के आजको समस्या कारणहरू छन् पत्ता प्रयास गर्नेछ।
प्रयोगकर्ताहरूले "संपर्क" मा सन्देश खोल्न छैन भनेर पहिलो कारण - साइटमा मर्मत कार्य वा अद्यावधिक पूरा भएको छ। मात्र संवाद, तर पनि अन्य सबै सेवा हो यो बिन्दुमा, नियम, तपाईं "असफल" हुनेछ।
यो स्थितिमा यो रोगी हुन र केही समय प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। रोकथाम अन्त गर्न आउँछ पछि, तपाईं ठीक पढ्न र इमेल सामाजिक सञ्जाल मा पठाउन सक्नेछन्। यहाँ तपाईँले केही निर्भर गर्दछ। तर, यो छ तपाईं सन्देश "VKontakte" पढ्न सक्दैन भन्ने मात्र कारण। अरू के यो व्यवहार पैदा गर्न सक्छ? गरेको छानबिन गरौं।
तपाईं मानिन्छ सामाजिक सञ्जाल को संभावनाहरु विस्तार गर्ने unlicensed आवेदन, साथै कार्यक्रम प्रयोग गर्न प्रयास भने, त्यहाँ पढ्न र पोष्टहरू लेख्न सक्ने छैनन् भन्ने तथ्यलाई केही आश्चर्यजनक छ। सायद, तपाईं भाइरस केही क्रमबद्ध "पिक अप"।
उहाँले आफ्नो ब्राउजरमा साइटको सामान्य कामकाज गर्न अवरोध हुन्छ। यो अवस्थामा त तपाईं कम्प्युटर संक्रमण विभिन्न देखि सिस्टम सफाई खर्च हुनेछ। कि पछि, नियम, सबै समस्या गायब। त्यसैले यदि तपाईं खोल्न छैन सन्देश "VKontakte", सञ्चालन प्रणाली स्क्यान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। सामान्य मा, दुई मुख्य कारण किन समस्या अनुभव हुन सक्छ। अब, कि सामना गर्न प्रयास गरौं , सन्देश "VKontakte" कसरी हेर्न साथै तिनीहरूलाई पठाउन। वास्तवमा, त्यहाँ केही गाह्रो छ वा विशेष ज्ञान (जस्तै, कार्यक्रम) आवश्यक छ।
हामी पहिले देखि नै यदि तपाईं सन्देश "VKontakte" खोल्न छैन के, तपाईं संग छलफल गर्नुभएको छ। अब त्यो सबै काम र कार्य वहन गरौं। म तपाईंलाई पठाएको पत्र कसरी पढ्न सक्छौं? गरेको छानबिन गरौं।
तपाईं मोबाईल अनुप्रयोग आउँछ भने, बस वस्तु "मेरो संदेश" मा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि उपयुक्त संवाद चयन गर्नुहोस्। नयाँ सन्देशहरू हाइलाइट गरिने छ। सबै छ। ती अवस्थाहरूमा, जब तपाईं कम्प्युटर मा हो, कुरा अलि भिन्न छन्।
"सम्पर्क मा" सन्देशहरू कसरी पढ्न कम्प्युटर संग? तपाईं प्रसन्न तुल्याउन निश्चित हो कि धेरै तरिकाहरू छन्। पहिलो परिदृश्य - यो पप-अप सञ्झ्याल देखि एक पत्र पढेर जस्तै केही छ। रसिद को समय तपाईं आफ्नो कम्प्युटर, ब्राउजर पर्दा तल (साइट को ट्याबमा) को अगाडि हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पत्र देखिन्छ जुन केही समय विन्डो लागि देख्नेछन्। सामान्यतया, यी अलर्ट बरु चाँडै नष्ट हुन्छन्।
साथै, तपाईँले अरू के गर्न सकिन्छ थाहा छैन भने, तपाईंले Tsiferki मा पठाइएका सन्देशहरू संख्या संग क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्तम्भ "मेरो संदेश" विपरीत स्थित छ। फलस्वरूप, तपाईं सबै सन्देशहरू पठाइएको सूची हेर्न हुनेछ। तिनीहरूलाई पढ्नुहोस् - र सबै अवस्थामा।
तपाईं पनि "मेरो संदेश" मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि इच्छित संवाद चयन गर्नुहोस्। नयाँ सन्देशहरू छन् जहाँ, तपाईं रंग चयन गठन गरेको छ। माउस कुराकानी क्लिक - र कुराकानी खुलेको छ। केही जटिल। लेखन पत्र - तर, अब हामी थप रोचक र सरल पेशा सम्झौता हुनेछ।
एक पत्र रचना
"VKontakte" सन्देश कसरी पठाउन? पहिलो, हामी उत्पन्न गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा, यो प्रक्रिया तपाईं धेरै लामो समय लिन छैन। को पाठ्यक्रम, तपाईं किलोमिटर पोस्ट छाप्न जाँदै छैन भने।
पहिलो, तपाईं सामाजिक सञ्जाल मा लग गर्न आवश्यक छ। कि पछि दुई तरिकामा छन्। पहिलो - आफ्नो भविष्य साथी को छनोट। आफ्नो प्रोफाइल मा एक नजर लिनुहोस्, र त्यसपछि "सन्देश पठाउनुहोस्।" परिणामस्वरूप सञ्झ्यालमा, एक पत्र, लेख्न यदि आवश्यक - फाइलहरू संलग्न (विन्डो "संलग्न" तल अनुच्छेद), त्यसपछि "पठाउनुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं पनि "प्रविष्ट गर्नुहोस्" कुञ्जी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को तरिका - अवस्थित संवादलाई प्रयोग छ। तपाईं "मेरो संदेश" भ्रमण गर्न, र त्यसपछि कुराकानी चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि एक इच्छित स्थिति लेख्न आवश्यक हुनेछ। पहिलो विधि त्यसै गरी अगाडि बढ्न - प्रेस "प्रविष्ट गर्नुहोस्" वा बटन "पठाउनुहोस्"। सबै मामला हो। रूपमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो। अब तपाईं यदि तपाईं सन्देश "VKontakte" खोल्न छैन, के थाहा, साथै कसरी पत्र लेख्ने र सामाजिक सञ्जाल तिनीहरूलाई पढ्न।
कसरी "मेरो दुनिया" मा आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न: बयान
हामी शहर परिवर्तन गर्न "स्कूलका साथीहरू" विश्वास
कसरी "स्कूलका साथीहरू" मा एक पृष्ठ सिर्जना गर्न। एक नयाँ पृष्ठ दर्ता
कसरी एक घर अप सुरक्षित गर्न: जवान मान्छे को लागि सल्लाह
सुरक्षा सौन्दर्य विपरीत छैन जब: Windows मा welded बारहरू
Proctologist - एक डाक्टर, एक महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा
साटन बुनाई: उपकरण, फोटो
फैशन संग आउनुहोस्। एक रूमाल-ट्यूब कसरी लगाउन?
नवजात हेरविचार: के बच्चाहरु swaddle गर्न आवश्यक
समारा आरक्षित क्षेत्र। Zhiguli आरक्षित
Sunna - कि ... मुस्लिम पवित्र परम्परा
Dzhon Meydzhor - मार्गरेट थ्याचर प्रतिस्थापित गर्ने
रोटी कालो: क्यालोरी (एक टुक्रा)। यो संरचना र रोटी को पोषण मूल्य